Firefighter 2022 ဆန့်ကျင်ရေးအစီအစဉ် agenda သူတို့ကို update လုပ်ပါ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
မီးသတ်သမားဖြစ်ခြင်းသည်မီးနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းထက်မကဆိုလိုသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်လူများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုသေချာစေပြီးအဆောက်အအုံများတွင်လည်းလုံခြုံစေမည်၊ သို့သော်အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ကောင်းကျိုးများစွာရှိပြီးဘဝအတွက်ထာဝရတည်နေရာဖြစ်သည်။ သင်သိလိုလျှင် သင့်ရဲ့မီးသတ်သမားအနေအထားရရန်သင်လိုအပ်သမျှဒီမှာငါတို့ပြောမယ်
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည် သင်မီးသတ်သမားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်ခေါ်ဆိုမှုကိုပြင်ဆင်ရာတွင်အထောက်အကူပြုမည့် didactic ပစ္စည်း။ အစီအစဉ်များကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးရောင်းချနေပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရယူနိုင်သည်။
ထို့အပြင်သင်အားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာကိုပြင်ဆင်ရန်အထွေထွေသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများပါသောရွေးချယ်စရာမေးခွန်းများနှင့်အပိုအရင်းအမြစ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဤအတိုက်အခံအမျိုးအစားသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုရမည်။ ထို့ကြောင့်လအနည်းငယ်အတွင်းအချို့သောရပ်ရွာလူထုနှင့်နောက်ဆက်တွဲများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ထွက်သွားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအမြဲတမ်းကွဲပြားနိုင်သည်၊ သင်သူတို့၏ကြေငြာချက်များကိုဂရုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်မှာတော့သူတို့ဟာစပိန်ပထဝီဝင်ရဲ့ကွဲပြားတဲ့နေရာတွေမှာခေါ်ယူကျင်းပခဲ့တယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာအုပ်စု (စီ) မှ ၇ နေရာဖြစ်သော La Rioja ဖြစ်ပြီး၊ လျှောက်လွှာတင်ရန်နောက်ဆုံးနေ့သည် ၁၁/၁၁ မှ ၁၀၈/၈၈ ဖြစ်သည်။ သင်လက်ရှိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသေးစိတ်ကိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အား တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း.
ရှိ စပိန်လူမျိုး။ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှနိုင်ငံသားများလည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။
အသက် ၁၆ နှစ်ကျော်ပါ နှင့်အများဆုံးအငြိမ်းစားအသက်အရွယ်ထက်မပို။
အောက်ပါအရည်အချင်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါ။ ဘွဲ့၊ အထူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ အဆင့်မြင့်ပညာရှင်၊ အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်မှုစက်ဝန်း (သို့) သူတို့နှင့်အတူတူပါပဲ။ ပေးထားသောရာထူးပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်ချက်များကွဲပြားနိုင်သည်ကိုဤအချက်တွင်သတိရပါ။ သူတို့ကသတ်သတ်မှတ်မှတ်အနေအထားထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်ပိုမိုမြင့်မားခေါင်းစဉ်ကိုတောင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်ကတည်းက။
အထဲဝင်ပါ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၏အပိုင် B, C + အီး (မီးသတ်သမားတစ်ယောက်အတွက်နေရာတစ်ခုသို့ရောက်လာသောအခါ၎င်းကိုတောင်းလေ့ရှိသည်။ )
လျှောက်လွှာများတင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်လျှောက်ထားသူများသည်အထက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ ရန် မီးသတ်ပြိုင်ပွဲများအတွက် sign up သင်ခေါ်ဆိုမှု၏နောက်ဆက်တွဲများတွင်ပါသောလျှောက်လွှာများကိုဖြည့်ရမည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာဒေတာကိုဖုံးလွှမ်းရန်နှင့်ဆက်စပ်သောတ ဦး တည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အောက်ပါတန်ဖိုးထားခံရဖို့တန်ရာဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ်။ အတိုက်အခံများ၏အကြိုစစ်ဆေးခြင်း၏ရလဒ်ကိုသိရှိပြီးနောက်ငါးရက်အကြာတွင်အပြီးသတ်ရေးဆွဲနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရသနည်းဟုမေးခြင်းသည်မထိခိုက်ပါ။ ခေါ်ဆိုမှုကိုထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့်ဆန့်ကျင်မှုများအတွက်စာရင်းသွင်းရန်သင့်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက် ၂၀ ရှိလိမ့်မည်။
La ပေးဆောင်ရန်အခကြေးငွေ၎င်းသည်လည်းကွဲပြားနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ယူရို ၃၀.၁၈ ခန့်ဖြစ်သည်။ Group C. အတွက်နောက်ဆုံးခေါ်ဆိုမှုဖြစ်သကဲ့သို့ထိုငွေကိုခေါ်ဆိုမှု၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွင်ထည့်သွင်းပေးမည့်အကောင့်နံပါတ်တစ်ခုသို့ပေးလိမ့်မည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးသည်နှင့် ၀ င်ခွင့်မပြုသူများစာရင်းကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဖယ်ထုတ်ခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်ငွေပေးချေခြင်းသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်းလျှောက်လွှာများကိုတင်ခြင်းမပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း: သီအိုရီအစိတ်အပိုင်း
အပိုင်း (၁): ဥပဒေပြုရေးကဏ္ on နှင့်ဘုံအစီအစဉ်များအပေါ်မေးခွန်းလွှာကိုဖြေပါ။ ဤအပိုင်းအတွက်သင်သည်တစ်နာရီခွဲနှင့်တစ်နာရီခွဲကြာလိမ့်မည်။
အဆင့် ၂။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်ရပ်ရွာ (သို့) ပြည်နယ်၏တိကျသောဥပဒေများနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းလွှာကိုဖြေပါ။
ချောမွေ့သောကြိုးတောင်တက်လျှောက်ထားသူသည်ချောမွေ့သောကြိုးဖြင့် ၅ မီတာတက်ရမည်။ ထိုင်အနေအထားကနေစတင်။ သငျသညျကြိုးထိပ်မှာဖြစ်သောခေါင်းလောင်းရောက်ရှိရန်နှစ်ခုကြိုးစားမှုရပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံးအချိန်မှာ ၁၅ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။
Fixed ဘား push-upsဖြေ - မေးစေ့ကဘားအစွန်းကိုကျော်သွားရမယ်။ ထိုအခါကရပ်ဆိုင်းမှုသို့သွားပေမယ့်ယိမ်းယိုင်ခြင်းမရှိဘဲလိမ့်မယ်။
ဒေါင်လိုက်ခုန်: ခုန်ချခြင်းအတွက်ခြေထောက်များကိုဖိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းခုန်မတိုင်မီခြေကိုမြေနှင့် ခွဲ၍ မရပါ။ သင်သည်သင်၏ခြေထောက်တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်မဆင်းပါကခုန်ခြင်းကိုပျက်ပြယ်အဖြစ်ကြေငြာနိုင်သည်။
အလေးမခြင်း: သင် supine ulna အနေအထားမှစတင်ပါလိမ့်မယ်, သင်တစ် ဦး ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ, သင်စက္ကန့် 40 အတွင်း, 60 အများဆုံးကီလိုဂရမ်, အများဆုံးအကြိမ်အရေအတွက်နှင့်အတူဘားရုတ်သိမ်းပေးရန်။
မီတာ 3000 ပြေးဖြေ။ ။ ဒီအကွာအဝေးကိုမင်းလမ်းပေါ်မှာသွားမယ်။
ရေကူး မီတာ 50 အလွတ်။
တက်ခြင်းစမ်းသပ်မှုစကေး- ဒါဟာအမြင့် ၂၀ မီတာအမြင့်ရှိစက်လှေကားကိုတက်ပြီးတက်လိမ့်မယ်။
၎င်းသည်မဖြစ်မနေပါ ၀ င်သော်လည်း၊
စတုတ္ထလေ့ကျင့်ခန်း - ဆေးစစ်ခြင်း
ပြီးခဲ့သည့်အပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစာမေးပွဲသည်သီအိုရီအပိုင်းပိုင်းပါဝင်ပြီးလေ့လာခဲ့သောသဘောတရားများကိုအသုံးချရန်ဖြစ်သည်။ အခြားအဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲတွင်အထက်နှင့်အောက်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းအင်ကိုတိုင်းတာသည်။ အလေ့အကျင့်လည်း psychotechnics ၏ပုံစံနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဆေးစစ်ခြင်းရှိပါသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း, ဒါမှမဟုတ်သီအိုရီအစိတ်အပိုင်းအတွက်, သငျသညျ၎င်း၏အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်နိမ့်ဆုံး5ရရန်ရှိသည် ဖျက်သိမ်းခံရဖို့မသကဲ့သို့။ အကယ်၍ သင်ဤအမှတ်သို့ရောက်လျှင်၊ သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများကိုအောင်မြင်လိမ့်မည်။ သူတို့ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့သင်လိုအပ်တဲ့အမှတ်အသားကိုလည်းသင်ဖြတ်ရမည်။ အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ရမှတ်များကိုပေါင်းထည့်ပြီးနောက်ဆုံးရလဒ်ကို ၅ ဖြင့်ပိုင်းခြားသည်။ ပထမတစ်ခုမှတက်သည်၊ ကြိုးတန်းသို့တက်ခြင်းနှင့်ကုန်းတက်ခြင်းစမ်းသပ်မှုသည်ဤတွင်မဝင်ရ၊ သူတို့အောင်မြင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
psychotechnical တတိယလေ့ကျင့်ခန်းကို ၀ မှ ၅ မှတ်သို့ခွဲထားလိမ့်မည်။ အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် Apt နှင့် Not Apt အဖြစ်တန်ဖိုးထားခံရလိမ့်မည်။ သင်သည်ဤအရာအလုံးစုံကိုကျော်လွန်သွားပြီးလျှင်သင်ပြိုင်ပွဲအဆင့်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဖျက်သိမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဆန္ဒရှိသည့်ရာထူးသို့မဟုတ်အခြားသူများအကြားတရားဝင်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးသင်တန်းများကဲ့သို့သောအရည်အချင်းများအားလုံး၏စုစုပေါင်းဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးသည်ခေါ်ဆိုမှု၏စာရွက်စာတမ်းတွင်ပါလိမ့်မည်။
အပြိုင်အဆိုင်များသောစာမေးပွဲများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ဘုံအစီအစဉ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်ထားသောရာထူးအမျိုးမျိုးအတွက်သီးခြားအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တင်ပြသောပြည်နယ်သို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်း၏တရားဝင်အစိတ်အပိုင်းလည်းရှိလိမ့်မည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းခေါ်ဆိုမှုထဲမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ခေါင်းစဉ် 1။ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်မီးဘေးကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ - Technical Building Code ။ အခြေခံစာရွက်စာတမ်း (SI) ။ မီးအမှု၌လုံခြုံရေး။ မီးကာကွယ်ရေးတပ်ဆင်မှုစည်းမျဉ်းများ။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မီးဘေးလုံခြုံမှု၏စည်းမျဉ်းများ။
ခေါင်းစဉ် 2။ မီးဓာတုဗေဒ။ နိဒါန်း။ တြိဂံနှင့်မီးတြိဂံ။ မီးလျှံလောင်ကျွမ်းခြင်း မီးမလောင်နိုင်သောလောင်ကျွမ်းခြင်း။ လောင်စာ။ activation စွမ်းအင် .. Chain တုံ့ပြန်မှု။ မီးမှရရှိလာတဲ့ထုတ်ကုန်။ မီးဘေးဖွံ့ဖြိုးရေး။ မီးများပျံ့နှံ့သွားသည်။ မီးများ၏အမျိုးအစားခွဲခြား။
ခေါင်းစဉ် 3။ နိဒါန်း။ လောင်စာဆီအမျိုးအစားများ။ လောင်စာဂုဏ်သတ္တိများ: ကယ်လိုရီတန်ဖိုး၊ ဓာတ်ပြုမှု၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ပါ ၀ င်မှု၊ သိပ်သည်းဆ၊ စက်နှိုးသည့်အချက်၊ မီးအမျိုးအစားများ။
ခေါင်းစဉ် 4။ မီးကြောင့်ရရှိလာတဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အဆိပ်အတောက်။
ခေါင်းစဉ် 5။ မီးသတ်နည်းလမ်းများ။ , အအေး, စိတ်ပျက်အားလျော့ - dilution, တားစီး။
ခေါင်းစဉ် 6။ မီးသတ်ဆေးများ။ ရေ - နိဒါန်း၊ ရူပဗေဒဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ၊ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများ၊ မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းယန္တရားများ၊ မီးသတ်လှံတံများ၊ အသုံးချခြင်းနည်းလမ်းများ၊ အသုံးပြုခြင်းတွင်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ၊
ခေါင်းစဉ် 7။ မီဒီယာမီးသတ်။ ရေပိုက်, ခွဲခြား, ဝိသေသလက္ခဏာများ, ရေပိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်နေရာချထား, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ ပြည်ထောင်စုအစိတ်အပိုင်းများ, fittings, adapters, ချိတ်, လျှော့ချ။ လှံ၊ လှံအမျိုးအစားများ၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ မီးငြိမ်းသတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်အခြားပစ္စည်းများ။
ခေါင်းစဉ် 8။ မီးသတ်ဆေးများ။ အစိုင်အခဲ extinguishing အေးဂျင့်များ။ ဓာတ်ငွေ့ရောစပ်အေးဂျင့်။
ခေါင်းစဉ် 9။ ဟိုက်ဒရောလစ်။ နိဒါန်း။ ဟိုက်ဒရောလစ်, Hydrostatic ။ Hydrodynamics ။ စီးဆင်းမှု။ သိပ်သည်းဆနှင့်တိကျသောအလေးချိန်။ ဖိအား။ ဝန်ဆုံးရှုံးမှု discharge ညီမျှခြင်း။ လှံအတွက်တုံ့ပြန်မှုအင်အား။ ဟိုက်ဒရောလစ်စုပ်စက်။ ပန့်အမျိုးအစားများ။ ပန့်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်။
ခေါင်းစဉ် 10။ အတွင်းပိုင်းမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - အခန်းတွင်းရှိမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောအခန်းတစ်ခန်း / အပြုအမူတစ်ခုတွင်မီးဖွင့်ခြင်း၊ လေ ၀ င်လေထွက်မ ၀ င်သောအခန်း / အပြုအမူများတွင်မီးဖွင့်ခြင်း၊ backdraught, မီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ဇယားစီး။ မိုးလုံလေလုံမီးသတ်နည်းပညာများ။ ရေငွိမ်ခြင်း၊ ငွိမ်းချမ်းသောနည်းများ၊ မီးသတ်နည်းများ၊ တံခါးပိတ်ဒေသများရှိမီးလောင်ခြင်းများတွင်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်တိုက်ခိုက်မှုလိုင်းများ၊ လုံခြုံရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ ရွေ့လျားမှုနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှု၊ reception ည့်ခံခြင်း - အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှညွှန်ကြားချက်အတည်ပြုခြင်း၊ မီးသတ်သမားတစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်မကမတော်တဆတိုက်မိခြင်း။
ခေါင်းစဉ် 11။ အမြှုပ်များ၊ အမြှုပ်အမျိုးအစားများသည်၎င်းတို့၏မူလသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုယန္တရားနှင့်အညီ။ ဂုဏ်သတ္တိများမီးသတ်။ မြှုပ်အာရုံအညီခွဲခြား။ အမြှုပ်အာရုံရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက်အခြေခံစံ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြှုပ်များနှင့်အမြှုပ်များ၏အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများ။ အမြှုပ်ပစ္စည်းများ၏ပါဝင်မှုကိုသက်ရောက်စေသောယာဉ်များအတွက်စပိန်စည်းမျဉ်းများ။ လည်ပတ်မှုနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများတွင်အမြှုပ်များအသုံးပြုခြင်း။
ခေါင်းစဉ် 12။ မြှုပ်ပစ္စည်းကိရိယာများခွဲခြား။ အမျိုးမျိုးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြှုပ်များဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စနစ်များနှင့်နည်းစနစ်များ။ လျှောက်လွှာပစ္စည်းကိရိယာများရွေးချယ်မှု။ အမြှုပ်လျှောက်ထား၏နည်းလမ်းများ။
ခေါင်းစဉ် 13။ မီး၌စစ်ဆင်ရေးလေဝင်လေထွက်: လေဝင်လေထွက်၏ရည်ရွယ်ချက်။ လေဝင်လေထွက်နည်းလမ်းများ။ လေဝင်လေထွက်အခြေခံမူ။ လေဝင်လေထွက်နည်းဗျူဟာ။ နည်းဗျူဟာမီးလေဝင်လေထွက်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။
ခေါင်းစဉ် 14။ တောမီး။ သစ်တောမီးနှင့်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောပြည်နယ်ဥပဒေပြဌာန်းခြင်း။ ဝါဒဖြန့်အချက်များ။ မီးအမျိုးအစားများ - တောမီး၏ပုံစံများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ။ မီးသတ်နည်းလမ်းများ။ သစ်တောမီးငြိမ်းသတ်ရန်စက်ကိရိယာများနှင့်လက်ကိုင်ကိရိယာများ။ အထွေထွေနှင့်တိကျသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းများ။
ခေါင်းစဉ် 15။ ကျောက်ချော။ နိဒါန်း။ ယာဉ်မတော်တဆမှုကယ်ဆယ်ရေးတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာများ။ ကယ်ဆယ်ရေး၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ဒြပ်စင်။ ယာဉ်တိုက်မှုများတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း။ အဆိုပါဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက်လုံခြုံမှု။
ခေါင်းစဉ် 16။ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ။ နိဒါန်း။ ချိတ်, ချေမှုန်းရေးသို့မဟုတ်ကြိုးကွင်းလှေကား။ တိုးချဲ့သို့မဟုတ်လျှောလှေကား။ အီလက်ထရွန်လှေကား။ ကြိုးလှေကား။ ကယ်ဆယ်ရေးဆင်းသက်လာ။ ရေပိုက်သို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးအင်္ကျီလက်။ လေထုမွေ့ယာများ။ အော်တိုလှေကားများနှင့်အလိုအလျောက်လက်မောင်း။ အမြင့်တွင်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ။
ခေါင်းစဉ် 17။ အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများဖော်ထုတ်ခြင်း နိဒါန်း။ အန္တရာယ်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကိုရည်ညွှန်းသည့်အန္တရာယ်ရှိသောစည်းမျဉ်းများ။ အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်၏အထွေထွေခွဲခြား။ ဖော်ထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ။
ခေါင်းစဉ် 18။ အန္တရာယ်ရှိကုန်ပစ္စည်းမတော်တဆမှုအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ နိဒါန်း။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်များ။ level III ဝတ်စုံများ၏အထူးသဝိသေသလက္ခဏာများ။ အန္တရာယ်ရှိကုန်ပစ္စည်းမတော်တဆမှုအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ လုပ်ဆောင်ချက်၏အခြေခံမူ။
ခေါင်းစဉ် 19။ ဆောက်လုပ်ရေး။ နိဒါန်း။ ဆောက်လုပ်ရေး - ဖွဲ့စည်းပုံ။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုပစ္စည်းများ။
ခေါင်းစဉ် 20။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဒဏ်ရာ။ နိဒါန်း။ အဆောက်အ ဦး တစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံရမည့်နေထိုင်ရန်အခြေအနေများ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခွအေနေ။ အဆောက်အ ဦး တစ်ခုပေါ်ဆွဲတင်သောဝန်များ။ အဆောက်အ ဦး များ၌ဒဏ်ရာများ။ ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများအက်ကွဲ။ အဆောက်အ ဦး တစ်ခု၏အပျက်အယွင်းများနှင့်မှန်ကန်သောဆောင်ရွက်ချက်များ။ မြေပြိုခြင်း။ Shoring နှင့် shoring ။ ပျက်စီးသွားသောဒြပ်စင်အရသိရသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျဆင်း။ Shoring ။ Shoring န်ဆောင်မှု။
ခေါင်းစဉ် 21။ အသက်ကယ်အခြေခံ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ resuscitation ။ အနာ၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ လက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်း၊ အရိုးကျိုးခြင်း၊ ရွေ့ပြောင်းနေရာချထားခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနှင့်ဘေးထွက်လုံခြုံရေးရာထူးများကိုစည်းရုံးခြင်း။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမီးလောင်မှုအတွက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်။
ခေါင်းစဉ် 22။ မီးသတ်ယာဉ်များ။ နိဒါန်း။ မီးသတ်နှင့်အရန်ဝန်ဆောင်မှုများကိုယာဉ်များ။ ဥရောပစံ 1846. စံ။ မီးသတ်နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်များ။ စံ UNE 23900 နှင့်အောက်ပါ။ ရေပန့်များ၏အခြေခံလက္ခဏာများ။ စံ UNEEN 1028-2: 2003 + A1: 2008 ။
ခေါင်းစဉ် 23။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်း - လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်သည့်ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ရန်စည်းမျဉ်းများ။ တစ် ဦး ချင်းကာကွယ်မှု။ အပိုင်း၏ခွဲခြား။ မီးဆန့်ကျင်ကိုယ်ပိုင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ။ ဓာတုကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ။
ခေါင်းစဉ် 24။ အလုပ်အကိုင်အန္တရယ်များတားဆီးခြင်းအပေါ်နိုဝင်ဘာလ 31, ၏ဥပဒေ 1995/8 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုသူများနှင့်သက်ဆိုင်သောနိမ့်ဆုံးကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်များအကြောင်းမေ ၃၀ ရက်မေလ ၃၀ ရက်တော်ဝင်အမိန့် ၇၇၃/၁၉၉၇ ။
ခေါင်းစဉ် 25။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှု။ နိဒါန်း။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှု။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ။ မီဒီယာမှီခိုအဖွဲ့များ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေလွတ်လပ်သောအသင်းများ။
ခေါင်းစဉ် 26။ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ဆက်သွယ်ရေး။ ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်စဉ်, ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ဒြပ်စင်။ ဆက်သွယ်ရေး။ ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှု။
ခေါင်းစဉ် 27။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား။ နိဒါန်း။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဓိပ္ပါယ်။ လျှပ်စစ်ဆားကစ်များတွင်ဥပဒေများနှင့်အခြေခံဖော်မြူလာများ။ မြင့်မားသောနှင့်အနိမ့်ဗို့အားလျှပ်စစ်တပ်ဆင်။ စားသုံးသူအဆောက်အ ဦး ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လျှပ်စစ်နိမ့်ဗို့အားစည်းမျဉ်း။
ခေါင်းစဉ် 28။ မက္ကင်းနစ်။ နိဒါန်း။ အဆိုပါလေးခုလေဖြတ်အင်ဂျင်။ ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်များ။ စက်နှိုးစနစ်။ ပြည်တွင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်အတွက်လောင်စာစနစ်။ ချောဆီအရည်ကြည်စနစ်။ အအေးစနစ်။ ဘရိတ်စနစ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံ။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်။
အမှန်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မီးသတ်သမားများအတွက်အကျော်ကြားဆုံးသောအကြံဖြစ်သည်။ သို့သော်အတိုက်အခံအတွင်း၌လုပ်ဆောင်ရန်အခြားရာထူးများနှင့်ရာထူးများလည်းရှိသည်။ ချမ်းသာ မီးသတ် ၎င်းသည်သစ်တောများသို့မဟုတ်စိမ်းလန်းသောasရိယာများနှင့်မြို့ပြနေရာများကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
ဤအချက်ကမီးထွက်ခွာသွားခြင်းအပြင်သူတို့သည်လည်းအကူအညီပေးကြောင်းဖော်ပြသည် လူများနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုကယ်တင်ပါ အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်များအားဖြင့်ပိတ်မိနေသောသူ။ ၎င်းတို့သည်မီးဘေးသို့မဟုတ်မီးရထားလမ်းမတော်တဆမှုစသည့်မီးများမှထွက်ပေါ်လာသောအန္တရာယ်များဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်မီးသတ်သမားရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးဆုံးအလုပ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ကတည်းက အိမ်ကယ်ဆယ်ရေး ရေကြီးမှုသို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကြောင့်ပြိုကျနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ သူတို့ကအပြင်ပန်းရောအတွင်းပိုင်းပါဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီတစ်ခါလည်းမတ သူတို့လုပ်ဖို့အများဆုံးမကြာခဏအလုပ်အကိုင်များ, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကလိုအပ်ပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောကုန်စည်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ဤကျွမ်းကျင်သူများလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အလုပ်တစ်ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အဆိပ် (သို့) လောင်ကျွမ်းနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုယိုစိမ့်သောအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
မီးသတ်သမားတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့အကြီးစားအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ သို့သော်အသေးစားအရေးပေါ်အခြေအနေများကဲ့သို့သောအခြားသူများလည်းရှိနေသည်မှာမှန်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သည် ကာကွယ်တားဆီးရေးအလုပ်အသေးစားမီးများသို့မဟုတ်ပိတ်မိနေသောတိရစ္ဆာန်များ။